Ukuphupha kwesitya Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Isitya yinto yemihla ngemihla. Inokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo, umzekelo i-ceramic, i-porcelain, iplastiki okanye i-stainless steel. Izitya zisetyenziselwa ukuphaka ukutya etafileni.
Izitya ziluncedo ekuphekeni, ngakumbi ukulungiselela iisaladi kunye nentlama. Ukuba, ngokuchaseneyo, isitya sibonakala kuthi njengesimboli sephupha, sinentsingiselo yokomfuziselo edlula ekusebenziseni kwemihla ngemihla isitya sasekhitshini. I-eriyali yesathelayithi nayo ingabizwa ngokuba sisitya ngenxa yesimo sayo.
Ukutolika isimboli yephupha "isitya", imeko ethile ephupheni kufuneka ihlale ithathelwa ingqalelo. Ubutyile esityeni? Ngaba yayize? Ngaba iwele esandleni sakho yaphuka?
1 Uphawu lwephupha «isitya» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isitya» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isitya» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isitya» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko isitya ephupheni sinokuba sisigaba se- Uxolo y ulonwabo ukwazisa. Uxinzelelo lomntu ekuthethwa ngaye okwangoku kubomi babo bemihla ngemihla luza kuphela ngokukhawuleza. Uya kuba namaxesha angakumbi kuye kwakhona. Kwangelo xesha, nangona kunjalo, kuya kufuneka ulumke ungachithi ixesha elininzi uchithe ngeli xesha lizolileyo. Ngaphandle koko, unokuzisola ngokukrakra ngoku kujonga kwangaphambili.
Isitya esigcwele ukutya ephupheni sikwathembisa ngokulungileyo zonxibelelwano nabantu. Iphupha eligcina ubuhlobo bakhe rhoqo kwaye liyathandwa ngoontanga bakhe.
Okuchasene kuyinyani xa iqokobhe lamaphupha lingenanto. Kule meko, imvakalelo enye ilawula kubomi bokwenyani. u lonwabo. Umntu ekuthethwa ngaye uhlala enethemba lokuba ngabahlobo, kodwa ekugqibeleni uyaphoxeka amaxesha ngamaxesha. Ngaphandle kokulunga kwakho, usenokungabi nakho ukuvelisa ubushushu beemvakalelo kunye nokusondela. Akakwazi ukubonisa abanye ukuba banokumthemba kwaye bathembele kwinkxaso yakhe.
Yamkeleka ngokubanzi into yokuba nabani na ophupha eshiya isitya uya kufumana ezininzi kungekudala. mathuba iyimfuneko. Ukuba isitya siyaphuka kwimeko yamaphupha, uya kusebenzisa elinye lala mathuba azenzele yena, enze abafowunelwa abatsha, mhlawumbi ade abe nesibindi sokuqalisa kwakhona.
Uphawu lwephupha «isitya» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, isitya sephupha luphawu lwe mfazi amaphepha lomntu ochaphazelekayo. Ngaphandle kwesini sakhe, ujongana namalungu abantu ababhinqileyo kwaye ahlawule ngakumbi iimvakalelo kunye ne-intuition kubomi bemihla ngemihla. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba isitya sigcwele amanzi ephupheni.
Ngamaxesha athile isitya sithathwa njengesinyulu kulo mongo. Isimboli sesondo itolikwe. Abanye oochwephesha bezengqondo bacinga ukuba isitya sibonisa ulangazelelo lokoneliseka ngokwesondo, ngakumbi kumaphupha amadoda. Umntu ekuthethwa ngaye naye ufuna ingqalelo kubantu besini esahlukileyo, ukwamkelwa, kunye nemvakalelo yokuziva ukhuselekile.
Uphawu lwephupha «isitya» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, isitya sikwangumqondiso wayo yonke into yobufazi, ngakumbi Ukuchuma y Iimvakalelo.